Tsangambato marbra vato vita amin'ny marbra habeana habe fahasoavana telo miboridna amidy amina ozinina sy mpanamboatra | Asa Atisan
Fitaovana: Marbra kilasy A
Loko: Ny sary loko na namboarina
Size: haben'ny fiainana na namboarina
Serivisy 1: Serivisy namboarina
Serivisy 2: Antoka ara-barotra
Teny lakile 1: sarivongana ny habakabaka telo
Teny lakile 2: haben'ny fiainana ireo sarivongana telo
TAG: Ireo haingo telo ireo sarivongana zaridaina telo ireo sary sokitra vita amin'ny marbra telo dia haben'ny fiainana Ny sarivongana telo dia malaza ireo sarivongana telo ho an'ny sary sokitra
Marbra mena milentika, marbra fotsy hunan, granite maitso ary ny sisa na namboarina
Ny haben'ny fiainana na ho fanitsiana anao
Sary sokitra biby, sary vongana ara-pivavahana, sarivongana Buddha, fanamaivanana vato, vatosoa vato, toeran'ny liona, toeran'ny elefanta vato ary sary sokitra biby vato. Vato vato loharano, vilany voninkazo vato, sary sokitra misy andian-jiro, rendrika vato, latabatra sy seza voasokitra, sary sokitra, sary sokitra marbra sns
haingon-trano, ivelany sy anaty trano, zaridaina, kianja, asa-tanana, zaridaina
Azontsika atao ny manome sarivongana marbra, sarivongana marbra, sarivongana marbra, sarivongana ho an'ny olona, ​​sary vongana, sarivongana, sarivongana, sarivongana ara-pinoana, sarivongana Maria, sarivongana Jesosy, sariolona buddha, sarivongana guanyin, sarivongana liona, sarivongana soavaly, sarivongana elefanta , sary voromahery, vazy voninkazo marbra, dabilio marbra, latabatra marbra, gazebo marbra, loharano marbra, loharano baolina, loharano fengshui, tsanganana sy andry marbra, am-patana marbra, fitoerana misy herinaratra, sarivongana zaridaina, sarivongana ivelany, sary sokitra haingon-trano ao anaty trano, sarivongana abstract, sary sokitra vy tsy miova sy ny sisa
Momba ireo andriamanitra hatsaran-tarehy telo
The Three Graces Marble Statue dia haingo neoclassical, amin'ireo angano telo lahy, zanakavavin'i Zeus - fantatra amin'ny sary sokitra sasany tamin'ny sarivongana, avy any ankavia sy havanana, Euphrosyne, Aglaea ary Thalia - izay voalaza fa misolo tena ny tanora / hatsaran-tarehy (Thalia ), ny fifaliana (Euphrosyne), ary ny hakantony (Aglaea).
Andininy momba ny sarivongana The Three Graces
Ny Statue Three Graces dia tovovavy mahafinaritra telo mifampitantana. Ny sary sokitra dia mampiasa am-pahendrena ny kofehy hanaronana ny tsiambaratelon'ny ampahany, malefaka sy malama ny tsipika, taratry ny volon-koditra malemilemy an'ny zazavavy. Ity sary sokitra ity dia tsy hay hadinoina ary sary sokitra an'izao tontolo izao. Ny tompontsika mahay manao sary sokitra dia afaka mamerina amin'ny fomba tonga lafatra ny Telo-tsangatsangana mba handravahana ny zaridaina kilasinao.
Fampiharana ny sary sokitra marbra kilasika
Alao sary an-tsaina ny hafaliany raha ity Sculpture Marbra Three Graces malaza ity dia napetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinao na sahaninao. Mampiasa marbra voajanahary isika ary sokitra amin'ny tanan'ny mpanao sary sokitra ao amintsika ny tanana. Ireo no manome aina ny vato. Ny rantsana vita amin'ny marbra Three Graces vita sokitra vita amin'ny vatosoa dia voajanahary ary na dia ny famoronan-koditra marevaka aza dia mazava. Ity sary sokitra marbra marefo ity dia tena mety tokoa ho haingo na fanomezana.
Factory efa za-draharaha
Izahay dia orinasa mpanao sary sokitra marbra miaraka amin'ny tantaran'ny 40 taona mahery. Manana tompona sokitra matihanina izahay, izay afaka mamerina amin'ny fomba tonga lafatra ny sary sokitra fahagola mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ary ny habeny dia azo namboarina araka ny takiana. Manana karazana sary sokitra marbra hafa koa isika, raha mila izany, mifandraisa aminay.
Vato tsy azo atao
Q: Wsatroka no tombanana ora nanomezana?
A: Ao anatin'ny 30 andro manaraka gettIng down-fandoavam-bola.
Q: WHich fe-potoana fandoavanas azo ekena?
A:1.By T / T. 30% dia petra-bola ary 70% dia karama amin'ny fankatoavana ny famokarana.
2.By L / C. Tokony amin'ny fahitana miaraka amin'ny banky ekena.
3.Western Union na Paypal amin'ny vidin'ny santionany.
Q: Inona no tkalitao izy antoka?
A: 1.Ny zava-kanto marbra dia mifanaraka amin'ny fenitra roa.
a) ASTM C503-05 sy ASTM C1526-03 nampiasaina marbra voajanahary ny Fihadiam-bato.
amin ') Smpanao asa tanana ambony kalitao fenitra na mpanjifa fangatahana.
2.Mifanaraka amin'ny fenitra roa ny zava-kanto vita amin'ny alimo na vy.
a) Araka ny tatitra fanadihadiana momba ny materialy avy amin'ny mpanamboatra.
b)Smpanao asa tanana ambony kalitao fenitra na mpanjifa fangatahana.
3.Rafitra fitantanana kalitao henjana sy matihanina afaka manaiky antoko fahatelo's fanaraha-maso, toy ny SGS na sns.
Q: Wsatroka no saran'ny fitaterana?
A: 1. Sarany mety amin'ny fitaterana an-dranomasina na sidina an'habakabaka avy any aloha.
2. Ekeo ny serivisy DDU amin'ny vidiny mirary.
Previous: Loharano tsara kalitao - loharano zaridaina voajanahary maoderina haingon-trano, loharano zaridaina - Asa Atisan
Manaraka: Loharano tsara kalitao - loharano rano haingon-trano maoderina ho an'ny trano - Asa Atisan
Andry sy tsanganana boribory marbra haingon-trano ho an'ny ...
Mpanefy vy vita amin'ny vy tsy misy fangarony maoderina ...
Morden mihaja trano marbra voajanahary haingon-trano ...
Professional Custom haingo vato romanina pilina ...
zaridaina ivelany mitaingina resin atomizing wat ...
Zoo haingon-trano sarivongana vy fanariana fiainana habe C ...